Ziyini Izinzuzo ze-CBD? | Inketho Yezempilo Engcono kakhulu yango-2020
Izinzuzo ze-CBD Oil
Izinzuzo Eziningi Zikawoyela we-CBD Osekelwa Ubufakazi
ICannabidiol noma i-CBD njengoba yaziwa kangcono yinto edumile kulezi zinsuku. Izinzuzo ze https://trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ ziningi zezifo eziningi ezivamile. I-CBD ingenye yama-cannabinoids angaphezu kwe-100 atholakala ku- Izitshalo ze-Cannabis sativa.
I-Tetrahydrocannabinol (iTHC) yi-cannabinoid eyinhloko etholakala ku-cannabis, iyona nto eyinhloko yensangu futhi ibangela ukuzwa kokuthola "phezulu." Ngokungafani ne-THC, i-CBD ayisebenzi ngokomqondo. Lesi sici senza i-CBD inketho ekhangayo kulabo abafuna ukukhululeka ngaphandle kwemiphumela yengqondo eguqula ingqondo. Uwoyela we-CBD wenziwa ngokukhipha i-CBD ezitshalweni ze-cannabis, bese uyixuba ngoyili wesithwali njengoyela lukakhukhunathi noma we-hemp.
I-CBD iqeda izinhlungu: Emzimbeni womuntu, kunohlelo olubizwa nge-Endocannabinoid system, olulawula imisebenzi eminingana kufaka phakathi isifiso sokudla, ukulala nokuphendula kwamasosha omzimba. Umzimba ukhiqiza ama-neurotransmitters abizwa ngama-endocannabinoids axhumene nama-cannabinoid receptors ohlelweni lwezinzwa. Ngokuya ngocwaningo, i-CBD iyasiza ekunciphiseni ubuhlungu obungapheli ngokuthinta umsebenzi wama-endocannabinoid receptors anciphisa ukuvuvukala nokusebenzisana nama-neurotransmitters.
I-CBD inganciphisa ukukhathazeka nokudangala: Ukukhathazeka nokudangala kuvame ukwelashwa ngezidakamizwa, ezingadala imiphumela emibi eminingi kubandakanya ukukhathazeka, ukozela, ukungasebenzi ocansini, ukuqwasha kanye nekhanda. Kungenzeka ukuthi u-https: //trytranquil.net/product/cbd-roll-on/ uwoyela angaba ukwelashwa kokukhathazeka nokudangala, kunikeze labo abaphila nalezi zinkinga ithuba lokuthola isisombululo semvelo. I-CBD ingasetshenziswa ukwelapha ukuqwasha kanye ne-PTSD. Lezi zinzuzo zikawoyela we-CBD zixhunyaniswe nekhono le-CBD lokusebenza kuma-receptors we-serotonin, i-neurotransmitter elawula imizwa nokuziphatha komphakathi.
I-CBD Kungaba Nezakhiwo Ze-Neuroprotective: Ososayensi bakholelwa ukuthi enye yezinzuzo zikawoyela we-CBD ukuthi amandla okwenza uhlelo lwe-endocannabinoid angasiza abantu abaphethwe yizifo zemizwa. Empeleni, okunye kokusetshenziswa okucwaningwe kakhulu kwe-CBD ekwelapheni ukuphazamiseka kwemizwa okufana nesifo sokuwa kanye ne-multiple sclerosis. Noma izifundo ezikulo mkhakha zintsha, izifundo ezimbalwa zibonise imiphumela ethembisayo. Noma kunjalo, kubalulekile ukusho ukuthi abanye abantu kulezi zifundo babone imiphumela yesibili ehlotshaniswa nayo Ukwelashwa kwe-CBD, njengomkhuhlane, ukukhathala nokudlikiza. CBD futhi I-Delta 8 THC ku-Bulk sekufundwe nangezinto zabo ezingaba khona ekwelapheni ezinye izifo eziningana zezinzwa.
I-CBD Inganciphisa Izimpawu Ezihlobene Nomdlavuza: Enye yezinzuzo ezisolwa kakhulu ngoyela we-CBD ukuthi ingasiza ngezimpawu ezihlobene nomdlavuza. Okuqinisekile, nokho, ukuthi i-CBD ingasiza abantu abaphethwe umdlavuza ukuthi babhekane nemiphumela emibi ehambisana nokwelashwa komdlavuza, njengesiyezi, isiyezi nobuhlungu. Kuthiwa i-CBD ingaba nezindawo zokulwa nomdlavuza. Noma kunjalo, abukho ubufakazi balokho okwamanje. Ucwaningo olwengeziwe luzodingeka ukufakazela ukusebenza kwalo.
I-CBD Ingasiza Ekunciphiseni Izinduna: Izinduna yisimo sesikhumba esithinta cishe i-10% yabantu. Kubangelwa izici ezahlukahlukene, amabhaktheriya, ukuvuvukala kwesikhumba, ukukhiqizwa ngokweqile kwe-sebum, kanye nezakhi zofuzo. Ngokuya ngocwaningo lwakamuva lwesayensi, enye yezinzuzo zikawoyela we-CBD ukuthi ingasiza ekwelapheni izinduna ngenxa yezinto zayo ezilwa nokuvuvukala kanye namandla okunciphisa ukukhiqizwa kwe-sebum.
I-CBD Ingazuzisa Impilo Yenhliziyo: Izifundo zakamuva zixhumanise i-CBD nezinzuzo eziningana zenhliziyo nohlelo lokujikeleza kwegazi, kufaka phakathi amandla okwehlisa umfutho wegazi. Umfutho wegazi ophakeme uxhunyaniswa nezingozi eziphakeme zezimo zenhliziyo, kufaka phakathi isifo sohlangothi nesifo senhliziyo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-CBD ingakwazi ukusiza ngomfutho wegazi ophakeme.
Ezinye Izinzuzo Ezingaba khona Zikawoyela we-CBD: Noma kudingeka olunye ucwaningo, i-CBD ingahle inikeze ezinye izinzuzo.
Ukwelashwa ngokumelene nokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa: I-CBD kucatshangwa ukuthi iguqula izifunda zobuchopho ezihlobene nokulutha kwezidakamizwa.
Imiphumela ye-antipsychotic: I-CBD ingasiza abantu abane-schizophrenia nezinye izifo zengqondo futhi banciphise izimpawu zengqondo.
Ukuvimbela isifo sikashukela: Ezifundweni namagundane, i-CBD yehlise izehlakalo zesifo sikashukela ngaphezulu kuka-50%.
Manje Usungathola Okuphakeme Ngokomthetho Ezifundazweni Eziningi. NguLifehacker
OlandelayoPost Next:I-CBD Nesifo Sikashukela - Kusetshenziswa uwoyela we-CBD ekuvuseleleni ushukela wegazi | Umkhiqizo omuhle kakhulu 2021